अब आफ्नो सेवा सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी सुबिसुको सेल्फ केयर पोर्टलबाट ~ Banking Khabar
अब आफ्नो सेवा सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी सुबिसुको सेल्फ केयर पोर्टलबाट
बैंकिङ खबर । नेपालको एक अग्रणी केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवाप्रदायक कम्पनी, सुबिसु केबलनेट प्रा. लि.ले आफ्ना ग्राहकवर्गका लागि सुबिसु सेल्फ केयर पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सुबिसु सेल्फ केयर पोर्टलको प्रयोगबाट ग्राहकहरुले आफुले खरिद गरेको सेवाको बारेमा विविध जानकारी लिनसक्नेछन् । साथै अनलाइन भुक्तानीबाट सेवा नविकरण समेत गर्न सक्नेछन् र भने आफ्नो हालको सेवालाई आफुले चाहे अनुरुप विभिन्न सेवा प्लानमा अपग्रेड गर्न सक्नेछन् । ग्राहकको सहजता एवमं सेवाको पारदर्शीताकालागि सेल्फ केयर पोर्टल सञ्चालन गरिएको विश्वास लिइएको छ । र आउने दिनहरुमा यस पोर्टलमाविभिन्नउपयोगी सेवाहरु पनि थपिदै लगिने छ ।
सुबिसु सेल्फ केयर पोर्टल selfcare.subisu.net.np बाट प्रयोग गर्न सकिने छ साथै www.subisu.net.np मा रहेको customer login द्धारा पनि प्रयोग गर्न सकिने छ ।
Clear TV, सुबिसु केबलनेट प्रा. लि., नेपालको एक अग्रणी केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटर्वक सेवा प्रदायक कम्पनीको उत्पादन हो । यो नेपालको पहिलो Digital Cable Television सेवा हो जसले MPEG4 Standard Definition र High Definition channels केबल मार्फत, Conditional Access System(CAS) को प्रयोग गरि Set Top Box को माध्यमबाट प्रसारण गर्दछ ।